Akụkọ - New Halliburton hybrid bit bit na -abawanye nkwụsi ike, ịrụ ọrụ nke ọma
Ọhụrụ ngwakọ Halliburton ngwa ngwa na -abawanye nkwụsi ike, arụmọrụ mkpọtụ
HOUSTON- Companylọ ọrụ Halliburton webatara Crush & Shear Hybrid Drill Bit, teknụzụ ọhụụ na-ejikọ arụmọrụ nke ndị na-egbutu PDC ọdịnala yana ike na-ebelata ike nke ihe ndị na-agagharị iji bulie arụmọrụ mkpọtụ ma bulie nkwụsi ike site na nhazi mgbanwe.
Teknụzụ ngwakọ ngwakọ dị ugbu a na -achụ ọsọ ịkụgharị ọkụ site na itinye ndị na -egbutusị na ihe na -atụgharị n'ime ebe ndị na -adịchaghị mkpa. Teknụzụ a na -akpọ Crush & Shear na -echetaghachi ntakịrị ihe site na itinye cones rola na etiti bit maka ịkụpịa ihe nke ọma wee kpalie ndị na -egbutusị ya n'ubu maka oke ịkpụ ajị anụ. N'ihi ya, bit ahụ na -abawanye njikwa, ịdịte aka ma na -enweta ọkwa dị elu nke ịbanye.
David Loveless, osote onye isi oche Drill Bits na Services kwuru, "Anyị weere ụzọ dị iche na teknụzụ ngwakọ ngwa ngwa wee kwalite ebe a na -egbutu ihe iji nwekwuo arụmọrụ mkpọtụ ka anyị na -enye nkwụsi ike n'akụkụ." "Teknụzụ Crush na Shear ga-enyere ndị na-arụ ọrụ aka ịkụ ngwa ngwa na njikwa ka mma na okwute siri ike, olulu mmiri na-ama jijiji na ngwa ngwa ọdịnala ma ọ bụ ngwa rolle cone curve."
Nke ọ bụla na-ejikwa ikike ahụ eme ihe na usoro ihe ndị ahịa (DatCI), netwọkụ mpaghara Halliburton nke ndị ọkachamara na-egwu olulu mmiri na-arụkọ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ iji hazie ibe maka ngwa akọwapụtara nke efere. Na mpaghara Midcon, Crush na Shear bit nyeere onye na -arụ ọrụ aka imecha akụkụ akụkụ ha naanị n'otu ọsọ - nweta ROP nke ụkwụ 25/elekere na -eti ROP na mfu nke ọma karịa pasent 25. Nke a zọpụtara onye ahịa ihe karịrị $ 120,000.
Oge ezipụ: Apr-13-2021